I-E6013 welding powder yokwenza i-welding electrode, okuwuhlobo lwekhabhoni yensimbi yensimbi ene-iron powder titania type coating. AC / DC. Welding Zonke-isikhundla. Inokusebenza okuhle kwe-welding futhi icishe ifafazwe. It has kabusha kabusha ukuthungela, okuhle slag detachability, bushelelezi Welding ukubukeka. Ibanga elijwayelekile nebanga le-rutile ongalikhetha.
Isiteleka se-1.Quick & ukuqala kabusha okulula nokususwa kwe-slag okulula
Ukusebenza kwe-arc okuzinzile nokuphazamiseka okuncane kwe-arc
3.Smooth futhi shiny ukubukeka & Excellent izakhiwo mechanical
4. Ukusebenza kahle okuphezulu kanye namanani aphezulu anomthelela ku -30c.
5. Izinga lokukhishwa okuphezulu
6. Excellent ukumelana ufa kanye x-ray ukusebenza
7. Ukupakisha: 300kgs damproof isikhwama emaphaketheni; noma njengoba ubudinga
1.I-elektrode kufanele ivunyelwe yi-350-380 ℃ ngehora eli-1 ngaphambi kokushisela, yomisa i-electrode lapho uyisebenzisa.
3.Ufanele usebenzise i-arc welding emfushane, ama-swings akufanele abe makhulu kakhulu, i-welding welding ewumngcingo kufanelekile.
Izinto I-TiO2 AL2O3 SiO2 Mnu I-CaO + MgO Okungokwemvelo Okunye
Umphumela wangempela 42 4.5 28 9 10.5 4 2
Welding electorde powder ka-E7018, E6011, E6010, E7024, njll ayatholakala. Pls xhumana nathi ukuthola eminye imininingwane.
Cubungula izidingo zobuchwepheshe:
Izingxenye ezibalulekile zokushisela kufanele zimakwe ngokucacile ngokuya ngemithetho efanele lapho kulungiselelwa imininingwane yenqubo ye-welding.
Ukuhlanganisa isikhunta (isakhiwo somhlangano) sezingxenye ezifakiwe, inani lokuncipha kwe-welding kufanele licatshangelwe. Kufanele kuqinisekiswe ukuthi ukubekezelelana kwezingxenye ezifakwe ngaphakathi kungaphakathi kwezidingo zomklamo.
Ngaphambi kokuhlangana, susa ukugqwala, uwoyela, uthuli nomswakama ngaphakathi kwe-25mm ezinhlangothini zombili zensimbi. Okwezinsimbi ezibalulekile zensimbi yesakhiwo esezingeni eliphansi, isikali se-oxide kufanele sisuswe.
Igebe lomhlangano kufanele lilawulwe ngesikhathi somhlangano. Igebe lama-butt welds lingu-2 ~ 3mm, futhi igebe lama-welds we-fillet lingu-0 ~ 2mm. Lapho igebe lendawo likhulu kakhulu, zama ukulinciphisa ngosayizi ocacisiwe. Akuvunyelwe neze ukufaka abafakeli esikhaleni, futhi ukubhanqa okuqinile akuvunyelwe ukunciphisa ukucindezeleka okusele kuzinto ezifakiwe.
Izinto zokushisela kanye nemingcele yenqubo esetshenzisiwe ku-welding tack welding izofana nezidingo ezisemthethweni ze-weld.
Imisebenzi yokushisela ingenziwa kuphela ngemuva kokuthi izingxenye zokushisela zidlulile ukuhlolwa komhlangano.
Okwezinto ezintsha nezinqubo ezintsha, ukuhlolwa kwenqubo kufanele kwenziwe futhi kungasetshenziswa kuphela ngemuva kokufaneleka.
I-slag ye-welding kanye nezinkinga empandeni we-weld kufanele zisuswe ngaphambi kokushisela i-weld weld ye-weld namanye ama-welding anemifantu
Ukushisela kungenziwa kuphela ngemuva kokuhlanzwa.
Ngaphambi kokushisela, kunqatshelwe ukuqala ukuthungela kwe-arc nokuhlola ukulungiswa kwamanje endaweni engeyona i-welding. Ngemuva kokushisela, indawo ye-weld kufanele ihlanzwe futhi yomiswe.
Sekukonke, ngezingxenye zokushisela ezibalulekile zezingxenye ezibalulekile zokushisela, uphawu lwensimbi kufanele lumakwe endaweni efanele ngemuva kokushisela.
Okwezingcwecwe zensimbi ezinobunzima buka-0.3 ~ 4mm, izindlela zokushisela ezinjenge-welding gas arc welding noma i-argon tungsten arc welding zisetshenziswa kakhulu.
Okokushisela izingxenye zensimbi ezingafani, kufanele kukhethwe ama-electrode, izintambo nokugeleza kwebanga elifanayo lamandla.
Lapho ushisela insimbi yesakhiwo esezingeni eliphansi, akukhuthazwa ukuthi ume phakathi, bese uzama ukuqedela insimbi ngasikhathi sinye; ngesikhathi sokushisela okunemigqa eminingi, amalunga aphakathi kwezendlalelo kufanele abhajwe futhi izinga lokushisa phakathi kwezendlalelo kufanele lilawulwe phakathi kuka-250 ~ 300 ℃. Ngaphambi kokushisela ungqimba olulandelayo lwe-welding seam, kufanele ihlanzwe. Hlola i-weld yongqimba olungaphezulu ukuze uqiniseke ukuthi azikho izinkinga.
Langaphambilini Ukuhlanganisa Ukushisela Induku D608
Olandelayo: Insimbi Emnene Yokushisela I-electrode AWS E6010